ओलीलाई प्रचण्डको चेतवानी– अविश्वासको प्रस्ताव हल नगरे बेठिक हुन्छ — Sanchar Kendra
१काठमाडाैंमा आज बिहानको तापक्रम यो वर्षकै कम, कस्ताे छ देशभरकाे माैसम ?
२भारतीय सेनाप्रमुख काठमाडाैं आउने मिति तोकियो, कोरोना संकटका बेला उनी किन आउदैछन नेपाल ?
३थप ५७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
४नेपालमा आज मात्रै यति धेरै कोरोना संक्रमितकाे मृत्यु, कहाँ कति ? हेर्नुहाेस विस्तृतमा
५कोरोना संक्रमणबाट नेकपा नेता चौधरीको मृत्यु
६नेपालमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम, भारतलाई ठुलो झट्का लाग्ने निश्चित
७डब्ल्यूएचओको अर्को नयाँ डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रास, गरियो यस्तो अपिल
८विश्वभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १ करोड ४ लाख नाघ्यो
९कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि देशव्यापी कर्फ्यूको घोषणा, कहिलेबाट हुन्छ लागु ?
१०अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पियोद्वारा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको भ्रमण शुरु
१२कोरोना संक्रमितको सूचीमा नेपाल कति औं स्थानमा छ ? हेर्नुहोस सुचिसहित
१प्रहरीका अधिकृतलाई पक्राउ गर्न खोज्दा सेना र प्रहरीबीच भि-डन्त, १० जनाको मृत्यु
Highlights Uncategorized राजनीति
ओलीलाई प्रचण्डको चेतवानी– अविश्वासको प्रस्ताव हल नगरे बेठिक हुन्छ
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै सांसदहरुले संसदीय दलमा राखेको अविश्वासको प्रस्तावका कारण नेकपाको केन्द्रमा पनि हलचल मच्चिएको छ । शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई लिएर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेटेका छन् ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । प्रमुख प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले मंगलबार दिउँसो १ बजे दलको बैठक बोलाएका हुन् ।
‘संसदीय दलको बैठक बस्नेबारे सूचना आएको छ । अरु कुरा थाहा भएन’, प्रदेश सांसद पदमा खड्काले भनिन् । तर, दलको नेता एवम् मुख्यमन्त्री शाहीसँग परामर्श समेत नगरी बैठक बोलाइएको एक नेताले बताए । उनले भने, ‘यति हतारमा प्रक्रिया बढाउनु हुँदैनथ्यो । मुख्यमन्त्रीसँग सामान्य परामर्श लिइएको भए उचित हुन्थ्यो ।’
प्रमुख सचेतक शाहले भने बहुमत सदस्यहरुले प्रस्ताव ल्याएकाले बैठक बोलाइएको बताए । ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान त गर्नु प¥यो । अब बैठकमै यसबारे छलफल हुन्छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आफ्नै दल नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा पूर्व माओवादी तर्फका तीनसहित १८ जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको ३३ सांसद छन् ।
भारतीय सेनाप्रमुख काठमाडाैं आउने मिति तोकियो, कोरोना संकटका बेला उनी किन आउदैछन नेपाल ?